Suuqleyda, Xayeysiinta Moobilka ma ku jirtaa faylalkaaga?
Axad, Agoosto 9, 2009 Axad, Abriil 24, 2016 Adam Yar
Maya, ugama jeedo dadka boorarka ku wata magaalada dhexdeeda. Waxaan ula jeedaa inaan macaamiisha iyo macaamiisha kula gaaro taleefanka gacanta. Tan waxaa caadi ahaan loo yaqaan Suuq-mobile laakiin waxaan arkay tiro dad ah oo wacaya Xayeysiinta Mobilada waayadan dambe. Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan oo ah Suuq-mobile; SMS/ Suuq geynta Farriinta qoraalka, bogagga moobiilka lagu hagaajiyay iyo barnaamijyada moobiillada ayaa ah saddexda ugu caansan.
In kasta oo nooc kasta oo ka mid ah suuqgeynta moobiilku ay leedahay faa'iidooyin iyo faa'iido darro u gaar ah dhammaantoodna ay sheeganayaan inay leeyihiin heerar madax furasho sare, waxa kaliya ee ku saabsan suuqgeynta moobiilka ee aan la diidi karin ayaa ah in isticmaalkeedu yahay sii kordhaya. Waxay umuuqataa inay kujirto mowqif lamid ah emayl suuq geyn ah dabayaaqadii 90-yadii iyo horaantii 2000's, ugusocodka noqoshada udub dhexaadka xeeladaha suuq geynta badankood.
Horeba waxaan u aragnay noocyo badan oo waaweyn iyo ganacsiyada yaryar oo kobcinaya nooc ka mid ah barnaamijka daacadnimada oo ku lug leh fariin qoraal ah. Sumadaha muusikada ee waaweyn ayaa muusikada ku iibinaya bogagga wareega ee mobilada. Shirkadaha softiweerku waxay sii daayaan barnaamijyo loogu talagalay oo keliya qalabka mobilada. Bandhigyada telefishanka ayaa adeegsanaya SMS si ay dakhli uga soo saaraan lacagaha fariimaha ee codbixinta is-dhexgalka ah. Siyaasiyiinta ayaa taageerayaasheeda kusoo jiidanaaya daqiiqado digniino moobayl ah.
Suuqgeynta moobiilku waxay leedahay laba faa'iido oo cajiib ah oo ka sarreeya xayeysiisyada kale iyo suuqgeynta
Dadku waxay wataan taleefannadooda gacanta - markaa inaad waqtiga ilaalisid oo aad hubiso in farriintu ku socoto qofka qaata waa wax la hubo! (Waxay sidoo kale la timaadaa masuuliyad, dabcan.)
Haysashada macaamiil ka-doorbid suuq-geynta moobiilka ayaa ku siinaysa a xiriir toos ah lambarka taleefankooda gacanta.
Mid ka mid ah tusaalaha weyn ee isticmaalka aaladan ayaa leh a istaraatiijiyada mobilada guryaha. Waxaan ku siineynaa wakiilada guryaha leh calaamado ay ku dhejinayaan hantidooda halkaas oo iibsadayaasha suurto galka ah ay u diraan farriin lambar si ay u helaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan hantida iyo sidoo kale dalxiis dalxiis Isla waqtigaas iibsadaha ayaa doortay oo uu helayo faahfaahinta, wakiilka guryaha ayaa sidoo kale la ogeysiiyaa codsiga iyo lambarka taleefanka gacanta ee iibsadaha! Xitaa waxaan ku xoojineynaa qaar ka mid ah xisaabaadka iyadoo cod shaqsi ahaan loo duubay wakiilka.
Tani waxay siinaysaa iibsadaha dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin - sidoo kale waxay siisaa wakiilka guryaha kirada qaab ay kula xiriiraan iyo mashquul iibsadaha. In nuqullo lagu dul rido calaamadda ardaaga ma oggolaanayso heerkaas hawlgelinta!
Haddaba su’aashu waxay tahay, maxaad samaynaysaa si aad uga faa’iideysato suuqgeynta mobilada iyo kanaalada moobiilka? Waa maxay dadaallada suuqgeynta moobiilka ee shirkaddaadu bilaabeyso? Hadaad tahay a wakaalada suuq geynta, Suuqgeynta Moobilka ma ku jirtaa faylalkaaga? Waa inay noqotaa!
Tags: xayeesiinta mobileSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkamarketing mobiletabaha suuq geynta mobilada
Agoosto 10, 2009 saacaddu markay ahayd 6:07 PM
Waan ogahay inaad si qurux badan u dhaleecayn jirtay ChaCha waagii hore, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan kugu qanciyo inaan ku qabanayno waxyaabo yaab leh xayeysiinta moobilka. Waxaan jeclaan lahaa inaan kugu casuumo webinar aan ku marti galineyno VP-ga Xayeysiinta, Greg Sterling, iyo agaasimaha guud ee 4INFO - runti, ujeedka webinar wuxuu ku jiraa ENGAGING macaamilka.
Waxaan rajeynayaa inaad ka soo qeyb geli karto!
Aug 11, 2009 at 1: 23 AM
Fikrado waaweyn. Waxaan u maleynayaa in moobiilku umuuqdo mid cabsi badan dad badan, laakiin runtii taasi maahan wax xun haddii aad lahadasho dadka saxda ah.
Waxyaabo xiiso leh oo aad ku sameyneyso xagasha guryaha. Waa inaad iska hubisaa qoraalkii ugu dambeeyay ee Darren Herman (http://bit.ly/10t0cO) deegaanka.
Sii wad shaqada weyn. 🙂
Aug 11, 2009 at 4: 00 AM
Ha u qaadan shaqsiyaddayda ku-xadgudubka ChaCha - Waan ogahay inay jiraan tiro aad u sarreeya oo dad aad u karti badan leh. Waxaan aad ugu dhaleeceynayaa maalgalinta dadweynaha ee ChaCha marka ay jiraan rag ila mid ah oo leh diiwaanno la xaqiijiyay iyo fikrado waaweyn oo lagu maalgeliyo… laga yaabee inay tahay xoogaa maseyr ah. 🙂
Waan hubin doonaa webinar-ka! Aad baad ugu mahadsantahay martiqaadka. IYO - ChaCha marwalba waa lagu soo dhaweynayaa inuu ku sameeyo boostada martida halkan Blog Teknolojiyada Suuqgeynta!
Rabitaanada ugu Fiican,
Agoosto 11, 2009 saacaddu markay ahayd 6:40 PM
Wanaagsan! Oo waxaan u maleynayaa inaan kugu soo qaadan doono boostada martida martida! Raadi inay ku soo socoto jidkaaga.